Ngwakọta | Ọkọwa Okwu Ahụike
Omume Ọjọọ nke Na-akpata Ihe mgbu
Bright Amponsah June 16, 2020
Ọtụtụ mmadụ na-adakarị n'ọnyà nke ịgwọ ọrịa kama ịchọ ụzọ isi gbochie nsogbu ahụ. Ọnọdụ ụfọdụ dị ka mgbu nkwonkwo nwere ike ịmalite site na sistemụ gị, mana enwere ike izere ụfọdụ ihe. Lifestylezọ ndụ gị nwere ike ịbụ ihe kpatara ọrịa ndị ị ga-enwe n’ọdịnihu. Eziokwu dị njọ bụ mgbe ị merela agadi; choro ahụ gị n’usoro karịa nke ọgbọ. Ọ bụ ihe nwute, na ọtụtụ mmadụ nwere ahụ ike na-adịghị mma mgbe ha mere agadi, a na-esitekwa n’otú ha biri n’oge ntorobịa ha. Ihe mgbu na ogbu na nkwonkwo na-emetụta ọgbọ nke ochie karịa ụmụaka.
Ihe nchịkọta maka anụ ahụ na anụahụ
Cartilage na ahụike dị mkpa maka agagharị na ike dị ogologo.
Ejikọtara ngwakọta obi ụtọ-Flex iji wepụta njikọta nke glucosamine HCL, methylsulphonylmethane (MSM), vitamin C na ngwa nri na nri ndị ọzọ, gụnyere: ntụpọ turmeric (95% curcumin), akwụkwọ ntanetị, Montmorency cherry, Panax ginseng , apụl cider mmanya ntụ ntụ, bromelain, ahịhịa na-ere ịnyịnya, kelp, papain, rosehip na mgbọrọgwụ ginger - niile n'otu usoro!
Mmegharị Ahụike 3
Nkwonkwo mgbu Home ọgwụ.
ShopFreeMart Siaga nwere ike inye aka belata mbufụt metụtara mgbu na nkwonkwo yana mgbe ewere 2 ma ọ bụ 3 kwa ụbọchị ọ bụ otu n'ime ihe kachasị mma achọtara m iji kpochapụ ihe na-akpata enweghị nsị, toxins na ọrịa ndị ọzọ nwere ike ịbụ ihe kpatara mgbu na nkwonkwo.